မောင်ရင်ငတေ ● ပါရီပုံရိပ်များ (နံရံပေါ်က အိုင်လပ်ဖ်ယူ) | MoeMaKa Burmese News & Media
Le Mur des Je T’aime, Square Jehan-Rictus (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
အဲဒီ နေရာကို . . …… ….. . ….. ….. ……… ဖန်တီးခဲ့ကြသူတို့က၊ Le Mur des Je T’aime လို့ အမည်ပေးပါတယ်၊ အင်္ဂ လိပ်လိုဆိုရင်တော့ Wall of Love ပေါ့၊ တချို့တွေကတော့ Le Mur des Romantiques လို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြ လေ့ရှိပါတယ်။
နံရံပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ အိုင်လပ်ဖ်ယူတွေကတော့ အတော်များပြားပါတယ်၊ ဘာသာစာစကားပေါင်း ၃၀၀ ကျော် စုဆောင်း ရရှိ ထားပါတယ်တဲ့။ Je t’aime, I love you, Ti voglio bene, Eu amo-te, Jeg elsker dig, Wo ai ni, Te quiero …. ….. …… …….. စသဖြင့် စသဖြင့် စုစုပေါင်း စကားလုံး တထောင်လောက် ရှိနေပါပြီတဲ့။
ဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာ အသုံးပြုမှု အရမ်း နည်းသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြတဲ့ အမေရိကန် ရက်ဒ်အင်ဒီးယန်း တွေရဲ့ Navajo စကားတို့ နယူးဇီလန် အော်ရဂျင်နယ်ကျွန်းသားတွေ ရဲ့ Maori စကားတို့ ရေခဲလူသား အက်စကီမိုတွေရဲ့ Inuit စကားတို့ အပြင် . …. . ……. …… …… မောင်ရင်ငတေတို့ရဲ့ မဟာ့မဟာ မဟာ ရွှေဗမာတို့ရဲ့ စကားလုံး ** * နင့်ကို ငါ ချစ်တယ် ** ကိုပါ ရှားရှား ပါးပါး ဝမ်းသာစဖွယ် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သက္ကရာဇ် နှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာ သူတို့ စတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လက်ရာ Le Mur des Je T’aime ကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာက အတည်ပြုလို့ လက်ခံခဲ့ မခံခဲ့ဆိုတာ မောင်ရင်ငတေ သေချာ မသိရှိပေမယ့် ဒီကနေ့ ဂူဂဲလ်မြေပုံပေါ် မှာတော့ Le Mur des Je T’aime ဆိုတာက ပါဝင်နေခဲ့ပြီမို့ အလွယ်နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါပြီ။
Le Livre des Je T’aime (The Book of I Love Yous) (Photo Google)